အဇာဘိုင်ဂျာနီဘာသာစကား - ဝီကီပီးဒီးယား
Azərbaycan dili, آذربایجان دیلی‎, Азәрбајҹан дили[note ၁]
၂၃ million (2018)e21
In Azerbaijan: Latin scriptAzerbaijani, North။</ref> (Azerbaijani alphabet)
aze – ပါဝင်သော ကုဒ်
အဇာဘိုင်ဂျာနီဘာသာစကား (Azerbaijani) (/ˌæzərbaɪˈdʒæni, -ɑːni/) သည် တာကစ်ဘာသာစကားများ (Turkic languages) အနွယ်ဝင် ဘာသာစကားတခုဖြစ်ပြီး အဓိကအားဖြင့် အဇာဘိုင်ဂျာနိစ်လူမျိုးများ (Azerbaijanis) ပြောဆိုသော ဘာသာစကားဖြစ်သည်။ အဇာဘိုင်ဂျန်နိုင်ငံ၊ တူရကီနိုင်ငံ၊ အီရန်နိုင်ငံ၊ ရုရှားနိုင်ငံ၊ အီရတ်နိုင်ငံများတွင် အဇာဘိုင်ဂျာနီဘာသာစကားကို ပြောဆိုကြသည်။
↑ Former Cyrillic spelling used in the en:Azerbaijan Soviet Socialist Republic.
↑ Bulut၊ Christiane (2018b)၊ "The Turkic varieties of Iran"၊ in Haig၊ Geoffrey; Khan၊ Geoffrey (eds.)၊ The Languages and Linguistics of Western Asia: An Areal Perspective၊ Walter de Gruyter၊ p. 398၊ ISBN 978-3110421682
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အဇာဘိုင်ဂျာနီဘာသာစကား&oldid=728382" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၃၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၉:၃၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။